သူ့ကိုတော့ မြန်မာပရိတ်သတ်တွေတော်တော်များများမြင်ဖူးကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူပါတဲ့ဇာတ်ကားတွေကို ရုပ်သံတွေက ရံဖန်ရံခါလွှင့်လေ့ရှိလို့ပါ ။ မင်းသားမို့ ချစ်သူခင်သူပေါများပြီးအချစ်ရေးမှာ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်လိမ့်မယ်လို့ မထင်ပါနဲ့ ... သူ့ရဲ့ အချစ်ရေးကတော့ လက်ထပ်မလိုနဲ့ ပြတ်ဆဲခဲ့ရတဲ့ ချစ်သူ ၅ ယောက်အပြင် လက်ထပ်ပြီးမှ ကွာရှင်းခဲ့ရတဲ့ ဇနီးဟောင်းတစ်ဦးပါ ရှိနေတာမို့ ၆ ကြိမ်စလုံးကံမကောင်းခဲ့တဲ့ အချစ်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရသူအဖြစ်နာမည်ကြီးတာမို့ သူ့ရဲ့ အချစ်ရေးအတိတ်အကြောင်းတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
1. Hi So Not
သူမကတော့ မင်းသားရဲ့ ပထမဆုံး အချစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ လက်ထပ်ခါနီးမှာ မင်းသားက အခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ခိုးတွဲနေတယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလတွေကြောင့် လမ်းခွဲတဲ့ထိဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
သူမလဲပဲမြန်မာပရိတ်သတ်တွေ သိကြတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပါ ။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ဇာတ်ကားရိုက်ရင်းနဲ့ ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြပြီး လက်ထပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေလုပ်ခဲ့ပေမယ့် လက်မထပ်ဖြစ်ခင် ပြတ်စဲသွားကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
3. Hi So Keung
မင်းသမီးနဲ့ ပြတ်ပြီးနောက်မှာ သူမနဲ့ တစ်လပဲတွဲဖြစ်လိုက်ပါတယ် ။ တစ်လအကြာမှာ ထပ်ပြတ်ပြန်တာပါပဲ ။
4. Jakjaan Akhamsiri
ဒီမင်းသမီးလေးနဲ့ လဲ ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်းကြိုက်ပြန်တာပါပဲ ။ ချစ်သူဖြစ်တာ သုံးပါတ်လောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာ သူတို့နှစ်ဦးလက်ထပ်မယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ် ။
သို့ပေမယ့် ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ လက်မထပ်ဖြစ်ဘဲပြတ်စဲသွားပြန်တာပါပဲ ။
5. Petch Bunyaphan
သူမနဲ့ကတော့မိဘက သဘောတူတာပါ ။ သူတို့နှစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ပေးဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြပေမယ့် တစ်နှစ်လောက်တွဲပြီး လမ်းခွဲရပြန်ပါတယ် ။
6. Woonsen Virithipa
သူမကတော့ မင်းသားလက်ထပ်ဖြစ်တဲ့ ချစ်သူပါ ။ ဒါပေမယ့်လည်း ၄ နှစ်ကြာမှာတော့ အိမ်ထောင်ရေးပြိုကွဲခဲ့ပြီး ကွာရှင်းခဲ့ရပါတယ် ။
မင်းသားရဲ့ အချစ်ရေးကတော့ မြင်တဲ့အတိုင်း အဖုအထစ်တွေနဲ့ပါ ။ ရုပ်ချောတိုင်း ငွေရှိတိုင်းလဲ အချစ်ရေးသာယာတာမဟုတ်ပါဘူး ။
အပြန်အလှန် တကယ်ချစ်ပြီး အနွံအတာ ခံကြမှသာ သာယာတဲ့ အချစ်ရေးကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။
Source : Daranews